खेलकुदमा प्रिह्याबिलिटेसनको महत्त्व | Hamro Khelkud
कुनैपनि चोट पछि वा शल्यक्रिया गरेपछि आफ्नो पुरानै अवस्थामा आउन गरिने प्रक्रियालाई रिह्याबिलिटेसन अथवा पुनर्स्थापना भनिन्छ । तर चोटको सम्भावना न्यूनीकरण गर्न वा भनौं आफ्नो शरीरलाई आफूले प्रतिस्पर्धा गर्ने खेलको लागि आवश्यक शक्ति र उचित विन्दुमा राखिरहन गरिने अभ्यास वा प्रक्रियालाई प्रिह्याबिलिटेसन भनिन्छ । चोट लागेपछि आउने समस्या वा डीकन्डीसनिङ कम गर्न पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
नेपाली खेलकुदमा चोट लागेपछि पुनरागमन गर्न फिजियोसम्म धाउने क्रम बिस्तारै सुरु हुने क्रममा छ । त्यसैले पनि पछिल्लो समय गम्भीर चोट लागेपछि पनि खेलाडीहरु मैदानमा फर्किएका खबर देखिन थालेका छन् । केहि वर्ष अघिसम्म भने स्थिति फरक थियो । नेपाली खेलकुदमा रिह्याबिलिटेसनको महत्त्व खेलाडीहरुले बुझ्ने क्रम बढेको छ । तर त्यसअघि झनै महत्त्वपूर्ण रहेको प्रिह्याबिलिटेसनको पाटोमा भने खेलाडी अनभिज्ञ छन् ।
पछिल्लो समय खेल जगतमा चोट लाग्नुको मुख्य कारण यस प्रकार छन् :
१. छोटो समयमा धेरै खेलका कारण दबाब
२. आफ्नो शारीरिक स्तरभन्दा माथि रहेर खेल्नुपर्ने
३. खेलाडीले खेलको चापका कारण विश्राम नपाउने
४. खेलाडीको फिटनेस स्तर र खेलको स्तरमा भिन्नता
५. खेल अथवा प्रशिक्षणमा लाग्ने चोट र त्यसको उपचार
नेपाली खेलकुदको बिडम्बना भन्नुपर्छ खेलाडीले पूरा समय खेल्न पाउँदैनन् । अधिकांश खेलमा आक्कल झुक्कल प्रतियोगिता हुन्छन् । र जब प्रतियोगिता हुन्छ खेलाडीहरुलाई निकै दबाब पर्ने गर्दछ । सिमित स्रोत साधनका कारण आयोजकले छोटो अवधिमा राखेको प्रतियोगितामा खेलाडीहरुले आफ्नो शरीरले साथ नदिएपनि लगातार खेल्नुपर्ने बाध्यता छ । अझ प्रशिक्षणमै पनि प्रतियोगिता सुरु हुनैलाग्दा मात्र उचित स्रोत र साधन उपलब्ध खेलाडी गराएर थप दबाब झेल्न बाध्य हुन्छन् ।
चोट लागेपछि खेलमा पुनरागमन गर्न रिह्याबिलिटेसनका लागि फिजियोथेरापी गर्नुलाई प्रमुख आधार मानिन्छ । यसमा खेलाडीमा चोटको कारण आएको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्ने र सामान्य अवस्थामा ल्याउन विशेष ध्यान दिइन्छ । यसमा दुःखाई काम गराउने, जोर्नेको रेन्ज पूरा राख्ने , मांशपेसीमा आएको कमी कमजोरीलाई मिलाउने, खेल अनुसार विशेष अभ्यास गराउने लगायत पक्ष पर्दछ ।
रिह्याबिलिटेसनकाे समय चोटको प्रकृति अनुसार कति लामो रहने निर्क्यौल हुन्छ । प्रायजसो चोटका कारण लामो समय मैदानबाहिर रहेका खेलाडीलाई खेलमा फर्कने धकधकीले सताइरहेको हुन्छ । यस समयलाई छोट्ट्याउन र चोट लाग्ने सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्न प्रिह्याबिलिटेसनलाई मुख्य रूपमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
कुनैपनि चोट लागेपछि शल्यक्रिया गर्नुअघि उक्त प्रक्रियाबाट आउने कठिनाइहरू न्यूनीकरण गर्न ५-१० दिन को लागि गरिने अभ्यासको पद्दतिलाई पनि प्रिह्याबिलिटेसन भनिने गरिन्छ । यसको मुख्य लक्ष्य भनेको खेलाडीमा शल्यक्रिया गरेपछि आउने समस्यालाई घटाउन अनि उक्त भागको कार्यक्षमता चाडै बढाउने नै हो ।
प्रिह्याबिलिटेसनका फाइदाहरु :
१. चोट लाग्नबाट बचाउने
२. शल्यक्रिया गरेको केही दिनमा मांशपेसी र जोर्नीको खुम्चिने अथवा सिद्ध हुने (रेन्ज अफ मोसन) हरु बिग्रने गर्छन , जुन प्रिह्याबिलिटेसन गरेकोमा सामान्य जस्तै रहन्छ
३. अस्पतालमा भर्ना भएर रहनुपर्ने समय घट्ने
४. रिह्याबिलिटेसन केहि चाँडो सुरु गर्न मिल्ने र त्यसपछिका प्रक्रियामा केहि सहजता हुने
५. कतिपय अवस्थामा प्रिह्याबिलिटेसनमै देखिएको सुधारका कारण शल्यक्रिया नै गर्नु नपरेको पनि छ
त्यसकारण खेलाडीले चोट लागेपछि रिह्याबिलिटेसन मात्र नभएर सामान्य अवस्थामा पनि प्रिह्याबिलिटेसनलाई ध्यानमा राख्ने हो भने धेरै समस्याबाट मुक्ति पाउन सक्छन् । यसमा खेलाडी आफैं त उत्तरदायी हुनु पर्छ नै, सँगसँगै प्रशिक्षक र सम्बन्धित खेल संघले पनि उचित कदम अघि चाल्दा सबैको भलाइ हुन्छ ।
लेखक डोटेल हाल सातदोबाटोस्थित अर्थोप्लास्ट रिह्याबिलिटेसन सेन्टरमा रिह्याबिलिटेसन इन्चार्जको रुपमा कार्यरत छन् । उनले भारतको कर्नाटकस्थित राजीव गान्धी विश्वविद्यालयबाट मस्कुलोस्केलेटल र स्पोर्ट्स फिजियोथेरापीमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । डोटेल हाल राष्ट्रिय भलिबल च्याम्पियन होंगान्जी न्यू डायमन्डको स्पोर्ट्स फिजियोथेरापिस्टको भूमिकामा पनि छन् ।